Myanmar Celebrity News သတင်းနဲ့အတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » Myanmar Celebrity News သတင်းနဲ့အတင်း
Myanmar Celebrity News သတင်းနဲ့အတင်း
Posted by ေခတ္သစ္ေပါက္က်ဳိင္း on Aug 16, 2011 in Celebrity, Copy/Paste | 26 comments
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်တုတ်ဝေသည့် Friday News Journal No.17.Aug 5.2011 နေ့တွင်ပါရှိသော မြန်မာနိုင်ငံမှအနုပညာရှင်လေးများဖြစ်ကြတဲ့ ရတနာမိုင်နဲ့နိုဗယ်ကျော်ကျော်တို့ရဲ့ နေရာလုရင်း ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းပါ။သိပြီးသူများအတွက်ရော အသိသေးသူများအတွက်ပါမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးရေးတစ်ခုမှာ ဂုဏ်ပြုသီချင်းတစ်ပုဒ်ရိုက်ကူးနေရင်း အငြင်းပွားရန်ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးလေးနှစ်ယောက် အကြောင်းကလည်း ကြားရသူအပေါင်းရယ်စရာကောင်းသလို အံ့ဩသက်ပြင်းချ ရပါတယ်။
ဖြစ်ပုံကတော့ ရုပ်သံက စီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ ဂုဏ်ပြုတေးတစ်ပုဒ်မှာ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ရတနာမိုင်နဲ့ နိုဗယ်ကျော်ကျော်တို့ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများလို့ ကင်မရာမန်းတွေခင်မှာဗျာ..ကင်မရာရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင် လက်မိူင်ချခဲ့ရပါတယ်။အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်၊မော်ဒယ်လေးတွေတန်းစီပြီး ရိုက်ကူးနေရာက နိုဗယ်ကျော်ကျော်နဲ့ ရတနာတို့က အလယ်နေရာကိုလုကြပါရော။လုရင်းနဲ့မှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မခံချင်အောင်ပြောကာ ပါးတွေနားတွေရိုက်မယ်ထိပါဖြစ်ပြီး၊မင်းသမီးအမေတွေပါ ပါလာကြပါတယ်၊”အရက်မှူးမှ ကျွဲခိုးပေါ်တယ်”ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံအတိုင်း နိုဗယ်ကျော်ကျော်က “နင့်လို လူတကာနဲ့…..တဲ့ကောင်မ မဟုတ်ဘူး”လို့ပြော်တဲ့စကားကို ရတနာမိုင်ကလည်း “နင်ဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကအစ အကုန်သိတယ်။ငါ့ ခြေဖျားတောင်မမှီတဲ့ ကောင်မကများ”ဆိုပြီး ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်တဲ့ဗိုလ်မှူးလည်း လက်မှိုင်ချခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ နိုဗယ်ကျော်ကျော်ကလည်း မနိုင်နိုင်ရာ ပြောချလိုက်တဲ့စကားက_ “ဗိုလ်မှူး ဒီအစီအစဉ်ကို ဘယ်သူ ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရိုက်ရတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်” လို့ အော်ပြောလိုက်တာကြောင့် အားလုံးပွဲကျသွားကြပါတယ်။အစီအစဉ်မစခင် လူစစုထဲက တိုင်းမှူးအခန်း ထဲကထွက်လာတဲ့ နိုဗယ်ကျော်ကျော်ကို တွေ့လိုက်အပေါင်းက လက်တို့တီးတိုး ဆိုနေကြပြန်သတဲ့။
ကဲ….ပရိသတ်ကြီးရေ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ ဒီလောက်အစီအစဉ်လေးကိုတောင် နေရာလုနေကြသတဲ့ မြန်မာမင်းသမီးလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်က အံ့ဩ လေးစားလောက်ပါရဲ့။
ဒေါသကြီးလို့ ၁၉ ချက် ချုက်လိုက်ရတဲ့ ရွှေစင် ။ ။ဇူလိုင်လ ၁၈ရက်နေ့က မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ရွှေစင်တစ်ယောက် ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက် ဆေးကုသခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် သူ့ပရိတ်သတ်တချို့ တအံ့တဩ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလောက် ငွေကြေးပြည့်စုံနေပါလျက်နဲ့ တစ်ခြားပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ဆေးခန်းမျိုး မတက်ပဲ အများပြည်သူနဲ့အတူ ဆေးရုံကြီးတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းကြည့်တော့ အမှုအခင်းနဲ့ပက်သက်နေလို့ တခြားပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေက လက်မခံကြောင်း၊သူမယခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး မတော်တဆ ထိခိုက်မိကာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ၁၉ချက် ချုပ်လိုက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။
ရွှေစင်နဲ့ပက်သက်ပြီး ကြားသိရသမျှက စပွန်ဆာချစ်သူ များလွန်းလှတဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေးက မူးလာပြီဆို လူကြားသူကြားမရှောင် အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတတ်တာတွေ့ရသူ အတော်များများက ပြောကြပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ညိူမင်းလွင်၊အဆိုတော် မင်းသားနေရဲမာန်တို့နဲကားရိုက်ပြီးကတည်းက ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ ရွှေစင်က အခုတော့ ဇတ်ကားထပ်ရိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေ ထက်မှာတော့ ရွှေစင် က သူမ ဒဏ်ရာရခဲ့တာ ရေချိုးခန်းမှာ မတော်တဆ ချော်လဲကျ သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းကနေအတင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ရွာသူရွာသားအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အရင်းအတိုင်းပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံရှင်များကား နစ်နာလိုစိတ် လုံးဝလုံးဝမရှိပါ။
ဖစ်မဖစ်ယလေကွယ်…။ မကျေနပ်ရင် လွှတ်တော်အမတ်တွေထံ သွားရင်ဖွင့် (ခံစားချက်ကိုပြောတာနော်) ကြဖို့ သဂျီးကိုယ်စား တိုက်တွန်းပါဒယ်ကွယ်။
လွှတ်တော်အမတ်မင်းတွေဆိုတာ… အဲဒီလိုမျိုး..လမ်းဘေးခွေးကိုက်တာကအစ..အသိပေးပြီး.. တိုင်ရတောရဖို့.. ထားထားတဲ့သူတွေပါ..။
တည့်တည့်ပြောရရင်.. ပြည်သူထဲက..ပြည်သူကိုအလုပ်အကြွေးပြု..အဲဒါကနေ.. ဥပဒေပြုဖို့..(စည်းကမ်းတွေချဖို့) ရှိနေရသူတွေပါ..
မြန်မာတွေ..ထစ်ကနဲရှိ… အမတ်တွေကို… တိုင်ကြစေလိုကြောင်း..။
အင်းးးးးးးးးးးးး ခုလောလောဆယ်တော့ သမာသမတ်ရှိတယ် အားကိုးရတယ်ဆိုပြီး သဂျီးကိုသာ တိုင်နေကြပါပကောလား။
အမလေး ဖတ်ရတာ မျက်စိမချမ်းသာစရာပါလား ။ မင်းသမီးလေးတွေက အဲ့ဒီ့လိုရှုပ်ကြတယ်တဲ့လား ။အပြင်
ပန်းတော့ ဘာမှမဟုတ်သလို ချစ်စရာကောင်းသလို ဟန်လုပ်ပြီး နောက်ကွယ်တော့ ကြောင်းစရာမကြီး တွေ
ဖြစ်နေကြတာကိုး ။ ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ ရင်ရှုပ်ပါတယ်။…..:S
ကြားရ သိရ မြင်ရ တာတွေကလည်းမသက်တာပါလား
ဒီလောက ဒီလိုပဲလို့ အပြောခံရအောင်လုပ်နေတာက သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါလားနော် ……….
အပေါ်ကသတင်းမှာဆို နေရာလေးတစ်နေရာရဖို့ ခမျာရင်းရှာတယ်နော်
အဓိကပြောချင်တာက ပါဝါ ပြိုင်ကြတယ်ပေါ့လေ… ဘယ်သူ့က ဘယ်သူ့ထက် ပိုပြီး အဲအဲ အရည်အချင်းတွေ ရှိလဲ ဆိုတာ
အဲ့ဒီလောကကို ခိုင်းနှိုင်းထားတာ တစ်ခု ပြေးသတိရမိတော့ … အခုတောင် ပြုံးစိစိဖြစ်နေတုန်းပဲ .. ။
အရင် လူတွေပြောကြတာတော့ …အ ဲ့ဒီလို နာမည်ကြီးဖို့ … ဟိုပြေးကပ်ရ ဒီပြေးကပ်ရနဲ့တဲ့ … ဆိတ်xxx နဲ့ တူတယ်တဲ့လေ … ဟိုကပ်လိုက် ဒီကပ်လိုက်ဆိုပဲ …. ။
ရတနာမိုင်လေး က အဲဒီလို ကြီးလား
ရုပ်ကလေး က ကလေးရုပ်လေးနဲ ့နော်
ညောင်မြစ်တူးတော့ ပုတ်သင်ဥ ပါ ပေါ်ကုန်တာပေါ့နော်
ရွှေစင် က ၁၉ချက်ကြီးများတောင် ချုပ်ရတယ် ဆိုတော့
ဘယ်နေရာ များ ပြဲသွား တာပါလိမ့် လို ့
“””အရက်မှူးမှ ကျွဲခိုးပေါ်တယ်”ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံအတိုင်း နိုဗယ်ကျော်ကျော်က “နင့်လို လူတကာနဲ့…..တဲ့ကောင်မ မဟုတ်ဘူး”လို့ပြော်တဲ့စကားကို ရတနာမိုင်ကလည်း “နင်ဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကအစ အကုန်သိတယ်။ငါ့ ခြေဖျားတောင်မမှီတဲ့ ကောင်မကများ”ဆိုပြီး ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်တဲ့”””
တော်တော်လေးကို မဟုတ်တဲ့နေရာမှာပြိ ုင်ဆိုင်နေကြပါရောလားနော်
မြန်မာနှိင်ငံမှာ မိုုးဟေကို နာမည်ကြီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မင်းသမီးတွေရော မင်းသမီးဖြစ်ချင်သူတွေရော တော်တော်များများဟာ အဝှာကိစ္စကို ထမင်းစားရေသောက်လောက်ဘဲသဘောထားနေကြတယ်ထင်တာဘဲ….
ကိုယ်တိုင်က အလှမ်းဝေးလို့ နားတော့မလည်သော်လည်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမူနဲ့ကတော့ အထင်သေးစရာတစ်ခုလို့ မြင်မိပါတယ်..နှိင်ငံခြားဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့…
ဪနာမည်ကြီးချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ ့ပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဝကို ရင်းရဲတဲ့ သူတို ့တွေကို အံ့ဩပါတယ်။
“နင့်လို လူတကာနဲ့…..တဲ့ကောင်မ မဟုတ်ဘူး” တောက်.！…..　အ ဲ့ဒီ နေရာစိတ် အဝင်စား ဆုံး ပဲ ။
အရမ်းစိတ်ဆိုးလာရင် မောင်နှမအရင်းတွေတောင် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း နာကျည်းအောင်ပြောတတ်ကြတာပဲ။ အပြိုင်အဆိုင်အရွယ်လည်းဖြစ်၊ မိန်းကလေးချင်းလည်းဖြစ်တော့ မခံချင်အောင် နိုင်ရင်ပြီးရော မဟုတ်တာရော ဟုတ်တာရောပြောတတ်ကြတာသဘာဝပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားရ မြင်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်မှန်နိုင်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။
video ဖိုင်လေးများရှိရင် share ပေးပါလားဗျို ့။
ကျနော် သဘောကျတာကတော့ နိုဗယ်ကျော်ကျော် နောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးပါပဲ….”ဗိုလ်မှူး ဒီအစီအစဉ်ကို ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာ သိတယ်နော် တဲ့….ေဩာ်…စဉ်းစားကြည့်မိတာကတော့ သူကပဲခွင့်ပြုမိန့်ရဖို့ ကြိုးစားထားပုံပဲ။
ကိုတော်ကာရေ…ဘယ်နေရာချုပ်ရသလဲဆိုတာကို ဂျာနယ်တိုက်ကိုဖုံးဆက်ပြီး စုံစမ်းထားပေးမယ်နော်…သိပ်လည်းအစိုးရိမ်မကြီးပါနဲဗျာ…ခင်ဗျားထင်တဲ့နေရာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး….
ခွင့်ပြ ုချက်ရဖို ့နေ ့ရောညပါကြိ ုးစားထားရတာထင်တယ် ဖြစ်သင့်ပါတယ်နိုဗယ့်ဘက်က။ ၁၉ချက်တောင်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ ့များလုပ်လိုက်လဲမသိဘူး။
အဖေ ခါးခွဲတုန်းက ၁ဝလက်မလောက် ရှိတယ် အဲဒါမှ ၁၄ချက်ပဲ ချုပ်ထားတာ တွေ့တယ်။
၁၉ချက်တောင် ဆိုတော့ တော်တော် ကြီးမား ရှည်လျားမလားပဲ တွေးမိတယ်။
့ဥပမာ မျက်နှာလို နေရာမျိုးဆိုရင် တော်တော် ကြည့်ရစိုးမယ်။
တကယ်လို့ တခြားနေရာ ရင်တို့ ကျော တို့ ဘာတို့ ဆိုရင်လည်း အကျီအဟိုက်တွေ ဝတ်လို့ မရ.. ဖြစ်သွားမလား တွေးမိတာပဲ။
သူနဲ့ငါ ရယ် အလယ်
ဘွတ်ဘွတ် ဘွတ်ဘွတ်နဲ ့မို ့
သံတွေ ထွက်တာမို ့
စူးစမ်း ဝင်ကာ ရှာမိတော့
အောက်က စာပိုဒ် ကို ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ (မြန်မာ စာသင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသာတွေအတွက်ပါ)
အိပ် ၊ ဘွတ် ၊ ခံ ၊ က ၊ ရွ ၊ ကုံး
နင့်လို လူတကာနဲ့………….တဲ့ကောင်မ မဟုတ်ဘူး
(အဲဒီနေ ့ရာ ကကိုယ်ဟာကိုယ် ကွက်လပ်ဖြည့်ရမှာလား ) စာမေးပွဲ မှာဆို စာလုံး 5လုံးလောက် ဖြည့်ဖို ့ပေးထားပါတယ် အခု တော့ ကိုယ်အတွေ ့နဲ ့ကိုယ်ဖြည်ရင်း မှန် နေမှ ဖြင့် ရှက်စရာကြီး ဒါနဲ ့သူတိုပြောတဲ ့အထဲမှာ လူတကာနဲ ့တဲ့ ဒါဆို mz ရွာ သားတွေကော ဘယ်တော့ အလှည်ရောက်မလဲဟင်
အော်ခုမှသိတယ်…အမေပေးတဲ ့လယ်တစ်ကွက်နဲ ့ဖြစ်နေကြတာ……အေးပေါ ့လေ…..လုပ်စားလို ့ရတုန်းလုပ်စားကြပေါ ့
(ကျေးဇူးကိုပေါက်ရေကြိုက်လွန်လွန် းလို ့)
တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့ နိုဘယ်လ်ကျနော့အခန်းထဲဝင်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူး ဟွင်းဟွင်းဟွင်း(ရီသံဖြစ်ပါသည်)
အခုလိုစိတ်ဓတ်ကတော့ မိမိရဲ ့အဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြရာကြပါတယ်..
သိက္ခာတို ့လူ ့ကျင့်ဝတ်တို ့နားမလည်တာ ရှက်ဖွယ်စရာကောင်းပါတယ်..